छठ पर्वको आस्थामाथि प्रहार (फरकमत) | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » छठ पर्वको आस्थामाथि प्रहार (फरकमत)
छठ पर्वको आस्थामाथि प्रहार (फरकमत)
‘हालको बाध्यात्मक परिस्थितिमा नजिकिदै गरेको छठ पर्वको सन्दर्भमा समेत अन्य साँस्कृतिक धार्मिक चाड पर्वमा जस्तै भिडभाडजन्य गतिविधि गर्न नपाईने, संस्कार अनुसार उक्त पर्व पनि घर–घरमै बसेर मनाउनु पर्ने नदी, तलाउ, खोला र पोखरी जस्ता सार्वजनिक स्थानमा भीडभाड हुने गरी भेला जम्मा हुन नपाइने गरी रोक लगाइएकोले यस विर्षको लागि यो पर्व घरभित्रै बसेर मनाई आफ्नो धर्म सँस्कारको संरक्षण गर्नु गराउनु हुन सबैमा अनुरोध छ’ भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो सिधै कुनै समुदायको सँस्कृति र आस्थामाथिको प्रहार हो । नदी, तलाउ, खोला र पोखरीमा गएर यो पर्व न मनाउ भनेको छ । यो पर्व नै यस्तो हो कि जो घरभन्दा बाहिर जलाशयमा गएर मनाइन्छ ।
जलाशयमा उभिएर अस्ताउँदो सूर्य र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर सूर्य देवताको पुजा गरिन्छ जोे घरभन्दा बाहिर मात्र सम्भव छ । दशैंतिहार घरभित्रै मनाउने पर्व हो । घरमै बसि बसि मनाउन सकिन्छ तर सरकारले त्यसमा कडाई गरेको कतै देखिएन । बरु मापदण्डका आधारमा भिडभाड नगरी पर्व मनाउन भनिएको थियो । तर छठ पर्वमा सिधै नदी, तलाउ, खोला र पोखरी जस्ता सार्वजनिक स्थापनामा भीडभाड हुने गरी भेला हुनमा रोक लगाइएको छ ।
सरकारले आफू भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि यसखालको हरकत गरेको बुझ्न सकिन्छ । अहिले बन्दाबन्दी छैन । निषेधज्ञा पनि छैन । शहर बजार सबै खुल्ला छन् । जताततै भिडभाड देख्न पाइन्छ । छठका लागि छठ घाटमा हुने भिडभाड भन्दा लाखौं गुणा बढी भिड काठमाडौंको असन बजारमा हुन्छन् । कालीमाटी तरकारी बजारमा हुन्छन् । न्युरोडको सडकमा हुन्छन् ।
बानेश्वरको चौकमा हुन्छ । कोटेश्वरको चौकमा हुन्छन् । के त्यहाँबाट कोरोना सर्दैन ? छठ पुजाको घाटमा हुने भिडभाडले मात्र कोरोनाको भाइरस सर्छ त ? काठमाडौंको महाबौद्धमा ठलमठेल गरी भएको भिडबाट कोरोना भाइरस सर्दैन भने कहाँ लेखिएको छ । मैले भिडभाड गर्नुपर्छ, भिडभाडका साथ छठ पर्व मनाउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । मेरो विचारमा त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने त्यस कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । भिडभाड नगरि छठी घाटमा छठ पुजा कसरी सम्पन्न गर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको हो ।
जनताले पनि त्यसमा सचेतता अपनाउनुपर्ने हो तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम सरकारको मात्र हो । सरकारले एउटा सूचना जारी गरेर आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन । शान्ति सुरक्षा दिने, भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो, सिडियो कार्यालयको हो । तर भिडभाड भएको ठाउँमा प्रहरी घुमिरहेका हुन्छन् तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, भिडभाड हुन नदिने काम गरेको देखिएको छैन ।
लकडाउनको बेलामा प्रहरीले हाइहुई गरेको, लकडाउन अवज्ञा गर्दा नियन्त्रणमा लिइ दण्डित गरेको पनि देखिन्थ्यो तर अहिले प्रहरीले कतै कुनै हस्तक्षेप गरेको देखिदैन । सरकारले भिडभाड गर्न निषेध गरेको हुन्छ र त्यस्ता निषेधित कार्यहरु गरे वा गराइएको पाइइमा संक्रमण रोग ऐन २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही गरिने भनि सूचना उल्लेख गरिएको हुन्छ तर त्यस्ता निषेधित कार्यहरु जाताततै भइरहेको देखिन्छ, कारवाही भएको कहि देखिदैन ।
अहिले सरकारको गाउँगाउँमा मात्र होइन वडा वडामा उपस्थिति रहेको छ । त्यसको के काम ? यस्तै यस्तै चाडपर्वलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हो । छठी घाटमा भिडभाड नहोस्, समाजिक दुरी कायम गरेर कसरी पर्व मनाउन सकिन्छ त्यसको एउटा मापदण्ड बनाएर त्यहीँ अनुसार पर्व मनाउनका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ तर पर्व नै नमनाउनुस् । मनाउने नै हो भने घरमै मनाउनुस् भन्नुको अर्थ सरकारले धर्म र आस्थामाथि प्रहार गरेको ठहरिन्छ ।
छठ घाटमा जाने सबै व्रतालुले मुखमा माक्स मात्र लगाई दियो भने कोरोना सर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यो ठूलो कुरा पनि होइन । घाटमा जाने बाटोमा उभिएर सबैलाई एउटा एउटा माक्स दिने र लगाउन आग्रह गर्ने हो भने धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमण सर्नबाट रोक्न सकिन्छ । जसले लगाउँदैन त्यसलाई तत्कालै दण्डित गर्नुपर्छ । त्यसको डरले पनि माक्स लगाउँछन् ।
प्रत्येक परिवारले एउटा एउटा सेनिटाइजर लिएर छठ पुजाको घाटमा जानुपर्छ । बेलाबेलामा हातमा लगाई रहनुपर्छ । वडास्तरबाट एउटा स्वयं सेवक बनाउने र प्रत्येक छठ घाटमा जाने र भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्ने, भिडभाड हुने ठाउँमा गएर सम्झाउने र समाजिक दुरी कायम गराउन प्रयास गर्ने । यो काम सरकारको हो तर त्यो काममा ध्यान नदिइ सिधै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर धर्म, सँस्कृतिमाथि रोक लगाउने काम मात्र गरेको देखिन्छन् ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गरेर तीज, दशैं, तिहारमा पनि भिडभाडलाई रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर कतै पनि नियन्त्रण भएको देखिएको थिएन । त्यसले झन जोखिम बढेको देखिएको छ । विज्ञप्ति जारी गरेर निर्देशन दिँदा त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्देशन जसले उल्लघंन गरेको छ त्यसलाई कारवाही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो गरेको भनेको आजसम्म पनि सुनिएको छैन । त्यसले गर्दा सरकारले जारी गरेको सूचनाको पटक पटक अवहेलना हुने गरेको देखिन्छ ।
यसले के देखिन्छ भने सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको देखिन्छ । भोली पर्सीतिर कुनै घटना नै भइ दियो भने हामीले सूचना जारी गरेको तर त्यसलाई नमानेको कारण यस्तो भयो भन्ने ठाउँ हुन्छ । त्यसैले सरकारले कार्यक्रम गर्न निषेध मात्र होइन, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।